Ururka 1 ee curiyayaasha | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Maxamed Xirsi Faarax — September 19, 2020
Joog utaxa kal-galka curiyayaasha ayaa loogu yeeraa ururo. Curiyayaasha isku ururka ah waxa ay lee yihiin astaamo is shabaha ama isku eg.
Kal-galkan hoose waxa uu ina tusayaa urur 1 oo ay kamidka yihiin Liityam (Li), Naatariyam (Na) iyo Kaaliyam (K).
Astaamaha urur 1
Ururka 1aad ee curiyayaasha waa biro.
Waxa ay gudbiyaan korontada.
Waa ay birbirqaan.
Waa ay ka jilicsan yihiin inta badan biraha kale.
Si fudud ayaa midi loogu kala jari karaa.
Bar dhalaalka iyo bar karka urur 1
Curiyayaasha ururka 1aad waa ay ka bar dhalaal hooseeyaan marka lala barbardhigo biraha kale intooda badan.
Jadwalkani waxa uu ina siinayaa tusaalooyin:
Bir Ma kamid yahay urur 1? Bar dhalaalka
Liityam Haa 180
Naatariyam Haa 98
Kaaliyam Haa 64
Rabidhiyam Haa 39
Xadiid May 1535
Kubram May 1083
Dahab May 1063
Marka hoos la aado laga bilaabo liityam ilaa rabidhiyam bar dhalaalku waa uu yaraanayaa, sidoo kale bar karkuna waa uu yaraanayaa si lamid ah bar dhalaalka.
Flgalkooda biyaha ururka 1
Ururka 1aad ee curiyayaasha waxa uu lee yahay falgal sareeya marka biyaha ay la kulmaan. Marka ay biyaha lafalgalayaan waxa ay ku wareegaan biyaha dushooda, falgalkaas waxa uu samaynayaa neefta haydarojiin iyo milan alkali ah. Milankaas oo tusaha guud ka dhigaya mid buluug ah marka lagu tijaabiyo.
Is le’eg ereyeedkan waxa ay soo koobayan falgalka naatariyam iyo kaaliyam ee biyaha:
Naatariyam + biyo –> haydaro ogsaydh naatariyam + haydarojiin
Kaaliyam + biyo –> haydaro ogsaydh kaaliyo iyo + haydarojiin
Philippa Gardom Hulme (2013). “Complete Chemistry for Cambridge Secondary 1”, Cambridge Check print and beyond, P 156-157.
Tags: Ururka 1 ee curiyayaasha
Next post KA TAXADDAR ARRINTAN: Talooyin aad kuu anfacaya
Previous post Falsafadda Nolosha Sida uu Qur'aanku u Dhigay